အောင်မြင်တဲ့ အမျိုးသမီးတွေ ပေးတဲ့ ဘဝသင်ခန်းစာ (၅)ခု - For her Myanmar
အောင်မြင်တဲ့ အမျိုးသမီးတွေ ပေးတဲ့ ဘဝသင်ခန်းစာ (၅)ခု
4 View(s) • by Sugar Cane
သူတို့တွေ ဘဝနဲ့ရင်းပြီးရခဲ့တဲ့ သင်ခန်းစာတွေက ဘာတွေလဲဆိုတော့ ….
ဘဝဆိုတာ အသိပညာတွေ၊ အတွေးအခေါ်တွေနဲ့ သင်ခန်းစာတွေကို ပို့ချရာ တက္ကသိုလ်ကြီးလို့ဆိုကြပါတယ်။ ဒီဘဝတက္ကသိုလ်ကြီးမှာ အောင်မြင်မှုတွေရခဲ့တဲ့ နယ်ပယ်အသီးသီးက ထင်ရှားသူအမျိုးသမီးအချို့ဟာ သူတို့ကိုယ်တိုင်ရခဲ့တဲ့ ဘဝသင်ခန်းစာ ငါးခုကို ဒီလိုမျှဝေပေးခဲ့ပါတယ်။
၁။ လူအများစုက သူတို့ ဘာဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတာကို မပြောရဲကြဘူး။ ဒါကြောင့် သူတို့ လိုချင်တာမှန်သမျှကို မရကြတာပဲ။
ဒီစကားကိုပြောခဲ့သူက နာမည်ကျော်အဆိုတော် မက်ဒေါနားပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မိဘတွေက ဘာဖြစ်စေချင်တာ၊ ဆရာသမားနဲ့ မိတ်ဆွေတွေက ဘာဖြစ်သင့်တယ်လို့တိုက်တွန်းကြတာတွေကို မလွန်ဆန်နိုင်သမျှ ကိုယ်ဖြစ်ချင်တာ ကိုယ်လိုချင်တာတွေနဲ့ ဝေးနေဦးမှာမို့ ကိုယ်ဖြစ်ချင်တာကိုရဲရဲရင့်ရင့်လုပ်ရဲတဲ့ သတ္တိကိုမွေးကြပါလို့ သူကတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။
၂။ ကိုယ်လုပ်ရမှာ ကြောက်တဲ့ အလုပ်ကို နေ့တိုင်း လုပ်ပါ။
ဒါကတော့ အမေရိကန်သမ္မကတော် အယ်လီနာရုစဗဲ့ရဲ့စကား ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်က အင်္ဂလိပ်စကားပြောရမှာ ကြောက်လန့်နေသူလား။ ဒါဆိုရင် အင်္ဂလိပ်စကား ကျွမ်းကျင်အောင် လေ့ကျင့်ပါ။ လူအများနဲ့ မိတ်ဆွေဖွဲ့ရမှာ ရှက်ရွံ့ကြောက်လန့်နေသလား။ ဒါဆိုရင် မိတ်ဆွေဖွဲ့တဲ့နေရာမှာ ကျွမ်းကျင်သူဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါ။ ဒီလိုဆိုရင် ကိုယ့်အရည်အသွေးတွေက ပိုပိုတိုးတက်လာမှာပဲလေ။
Related Article >>> အောင်မြင်တဲ့ အမျိုးသမီးတွေ သူတို့ပိတ်ရက်တွေကို ဘယ်လိုအသုံးချကြသလဲ?
၃။ ဘဝရဲ့ ဒုက္ခတွေဆိုတာ ဘဝရဲ့ လက်ဆောင်တွေပါပဲ။ တုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်ဖို့ မကြိုးစားပါနဲ့။ ဘယ်လိုဆက်ရပ်တည်မလဲ ဆိုတဲ့ နည်းလမ်းသစ်ကိုသာ ရှာပါ။
ဒါကတော့ ကမ္ဘာကျော်အမျိုးသမီး အော်ပရာဝင်းဖရေးရဲ့ ဘဝသင်ခန်းစာတစ်ခုပါပဲ။ ကြမ်းတမ်းလွန်းတဲ့ ဘဝကနေ ကမ္ဘာကျော်ဖြစ်လာအောင် ကြိုးစားခဲ့သူလို့ လူအများသိထားတဲ့ သူ့မှာ ဘဝနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ကြမ်းတမ်းတဲ့သင်ခန်းစာတွေ များလွန်းပါတယ်။ ဘဝရဲ့ ဒုက္ခတွေကို အရှုံးမပေးဘဲ အမြဲတစေကြိုးစားနေမယ်ဆိုရင်တော့ အောင်မြင်မှုဟာ မဝေးလှဘူးဆိုတာ သူက သက်သေပြထားတာပါပဲ။
၄။ လူတွေက ကျရှုံးတတ်ပါတယ်။ တော်လွန်းလို့၊ ထက်မြက်လွန်းလို့၊ အောင်မြင်လွန်းလို့ မရှုံးနိမ့်တော့ဘူးဆိုတာ ဘယ်တော့မှမရှိပါဘူး။ ကျရှုံးမှုဆိုတာ ဖြစ်တတ်တဲ့ အရာပါ။
နာမည်ကြီးအဆိုတော် ဘီယွန်းဆေးရဲ့ ဘဝသင်ခန်းစာဖြစ်ပါတယ်။ လူတိုင်း ရှုံးနိမ့်ဖူးတယ်။ လူတိုင်းအမှားတွေလုပ်ဖူးတယ်။ ရှုံးနိမ့်မှုတွေ၊ ကျရှုံးမှုတွေကို ဘယ်လိုတုံ့ပြန်အနိုင်ယူပြလဲဆိုတာကြောင့်သာ လူတွေကကွဲပြားသွားပါသတဲ့။
၅။ ကိုယ် နှစ်နဲ့ချီ အချိန်ယူတည်ဆောက်ထားတဲ့ အရာတစ်ခုဟာ တစ်ညတည်းနဲ့ ပျက်စီးသွားနိုင်ပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် တည်ဆောက်နေဖို့တော့ လိုပါတယ်။
ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေး နိုဘယ်လ်ဆုရှင် မာသာထရီဇာက သူရရှိခဲ့တဲ့ ဘဝသင်ခန်းစာတစ်ခုကို ဒီလိုမျှဝေပေးခဲ့တာပါ။ လောကဓံတရားဆိုတာ အချိန်မရွေးရောက်လာပြီး ကိုယ်တည်ဆောက်ခဲ့သမျှကို ဖျက်ဆီးသွားနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒါကြောင့်တော့ ကိုယ့်ကြိုးစားအားထုတ်မှုကို မရပ်လိုက်ပါနဲ့နော်။
ဒီသင်ခန်းစာတွေက အောင်မြင်မှုရရှိထားတဲ့ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ ဘဝထဲက သင်ခန်းစာတွေပါ။ လူတိုင်းမှာလည်း သူတို့ကို ဘဝကပေးထားတဲ့ သင်ခန်းစာတွေရှိမှာပါပဲ။ ယောင်းတို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ဘဝသင်ခန်းစာတွေရှိရင် မျှဝေပေးခဲ့ပါဦး။
References : get-a-wingman, careergirldaily
သူတို့တှေ ဘဝနဲ့ရငျးပွီးရခဲ့တဲ့ သငျခနျးစာတှကေ ဘာတှလေဲဆိုတော့ ….
ဘဝဆိုတာ အသိပညာတှေ၊ အတှေးအချေါတှနေဲ့ သငျခနျးစာတှကေို ပို့ခရြာ တက်ကသိုလျကွီးလို့ဆိုကွပါတယျ။ ဒီဘဝတက်ကသိုလျကွီးမှာ အောငျမွငျမှုတှရေခဲ့တဲ့ နယျပယျအသီးသီးက ထငျရှားသူအမြိုးသမီးအခြို့ဟာ သူတို့ကိုယျတိုငျရခဲ့တဲ့ ဘဝသငျခနျးစာ ငါးခုကို ဒီလိုမြှဝပေေးခဲ့ပါတယျ။
၁။ လူအမြားစုက သူတို့ ဘာဖွဈခငျြတယျဆိုတာကို မပွောရဲကွဘူး။ ဒါကွောငျ့ သူတို့ လိုခငျြတာမှနျသမြှကို မရကွတာပဲ။
ဒီစကားကိုပွောခဲ့သူက နာမညျကြျောအဆိုတျော မကျဒေါနားပဲ ဖွဈပါတယျ။ မိဘတှကေ ဘာဖွဈစခေငျြတာ၊ ဆရာသမားနဲ့ မိတျဆှတှေကေ ဘာဖွဈသငျ့တယျလို့တိုကျတှနျးကွတာတှကေို မလှနျဆနျနိုငျသမြှ ကိုယျဖွဈခငျြတာ ကိုယျလိုခငျြတာတှနေဲ့ ဝေးနဦေးမှာမို့ ကိုယျဖွဈခငျြတာကိုရဲရဲရငျ့ရငျ့လုပျရဲတဲ့ သတ်တိကိုမှေးကွပါလို့ သူကတိုကျတှနျးခဲ့ပါတယျ။
၂။ ကိုယျလုပျရမှာ ကွောကျတဲ့ အလုပျကို နတေို့ငျး လုပျပါ။
ဒါကတော့ အမရေိကနျသမ်မကတျော အယျလီနာရုစဗဲ့ရဲ့စကား ဖွဈပါတယျ။ ကိုယျက အင်ျဂလိပျစကားပွောရမှာ ကွောကျလနျ့နသေူလား။ ဒါဆိုရငျ အင်ျဂလိပျစကား ကြှမျးကငျြအောငျ လကေ့ငျြ့ပါ။ လူအမြားနဲ့ မိတျဆှဖှေဲ့ရမှာ ရှကျရှံ့ကွောကျလနျ့နသေလား။ ဒါဆိုရငျ မိတျဆှဖှေဲ့တဲ့နရောမှာ ကြှမျးကငျြသူဖွဈအောငျကွိုးစားပါ။ ဒီလိုဆိုရငျ ကိုယျ့အရညျအသှေးတှကေ ပိုပိုတိုးတကျလာမှာပဲလေ။
Related Article >>> အောငျမွငျတဲ့ အမြိုးသမီးတှေ သူတို့ပိတျရကျတှကေို ဘယျလိုအသုံးခကြွသလဲ?
၃။ ဘဝရဲ့ ဒုက်ခတှဆေိုတာ ဘဝရဲ့ လကျဆောငျတှပေါပဲ။ တုံ့ပွနျတိုကျခိုကျဖို့ မကွိုးစားပါနဲ့။ ဘယျလိုဆကျရပျတညျမလဲ ဆိုတဲ့ နညျးလမျးသဈကိုသာ ရှာပါ။
ဒါကတော့ ကမ်ဘာကြျောအမြိုးသမီး အျောပရာဝငျးဖရေးရဲ့ ဘဝသငျခနျးစာတဈခုပါပဲ။ ကွမျးတမျးလှနျးတဲ့ ဘဝကနေ ကမ်ဘာကြျောဖွဈလာအောငျ ကွိုးစားခဲ့သူလို့ လူအမြားသိထားတဲ့ သူ့မှာ ဘဝနဲ့ပတျသကျတဲ့ ကွမျးတမျးတဲ့သငျခနျးစာတှေ မြားလှနျးပါတယျ။ ဘဝရဲ့ ဒုက်ခတှကေို အရှုံးမပေးဘဲ အမွဲတစကွေိုးစားနမေယျဆိုရငျတော့ အောငျမွငျမှုဟာ မဝေးလှဘူးဆိုတာ သူက သကျသပွေထားတာပါပဲ။
၄။ လူတှကေ ကရြှုံးတတျပါတယျ။ တျောလှနျးလို့၊ ထကျမွကျလှနျးလို့၊ အောငျမွငျလှနျးလို့ မရှုံးနိမျ့တော့ဘူးဆိုတာ ဘယျတော့မှမရှိပါဘူး။ ကရြှုံးမှုဆိုတာ ဖွဈတတျတဲ့ အရာပါ။
နာမညျကွီးအဆိုတျော ဘီယှနျးဆေးရဲ့ ဘဝသငျခနျးစာဖွဈပါတယျ။ လူတိုငျး ရှုံးနိမျ့ဖူးတယျ။ လူတိုငျးအမှားတှလေုပျဖူးတယျ။ ရှုံးနိမျ့မှုတှေ၊ ကရြှုံးမှုတှကေို ဘယျလိုတုံ့ပွနျအနိုငျယူပွလဲဆိုတာကွောငျ့သာ လူတှကေကှဲပွားသှားပါသတဲ့။
၅။ ကိုယျ နှဈနဲ့ခြီ အခြိနျယူတညျဆောကျထားတဲ့ အရာတဈခုဟာ တဈညတညျးနဲ့ ပကျြစီးသှားနိုငျပါတယျ။ ဘယျလိုပဲဖွဈဖွဈ တညျဆောကျနဖေို့တော့ လိုပါတယျ။
ကမ်ဘာ့ငွိမျးခမျြးရေး နိုဘယျလျဆုရှငျ မာသာထရီဇာက သူရရှိခဲ့တဲ့ ဘဝသငျခနျးစာတဈခုကို ဒီလိုမြှဝပေေးခဲ့တာပါ။ လောကဓံတရားဆိုတာ အခြိနျမရှေးရောကျလာပွီး ကိုယျတညျဆောကျခဲ့သမြှကို ဖကျြဆီးသှားနိုငျပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ အဲဒါကွောငျ့တော့ ကိုယျ့ကွိုးစားအားထုတျမှုကို မရပျလိုကျပါနဲ့နျော။
ဒီသငျခနျးစာတှကေ အောငျမွငျမှုရရှိထားတဲ့ အမြိုးသမီးတှရေဲ့ ဘဝထဲက သငျခနျးစာတှပေါ။ လူတိုငျးမှာလညျး သူတို့ကို ဘဝကပေးထားတဲ့ သငျခနျးစာတှရှေိမှာပါပဲ။ ယောငျးတို့ရဲ့ ကိုယျပိုငျဘဝသငျခနျးစာတှရှေိရငျ မြှဝပေေးခဲ့ပါဦး။
Tags: Life Lessons, Motivation, qoutes, women
ခြောက်သွေ့တဲ့ အသားအရေကို ပျားရည်သုံးပြီး ထိန်းသိမ်းမယ်
Sugar Cane November 2, 2018